ကိုရီးယားအလုပ်အတွက် ဘာသာစကား စာမေးပွဲစစ်ဆေး၊ သုံးသောင်းခန့် ဖြေဆို - Yangon Media Group
ကိုရီးယားအလုပ်အတွက် ဘာသာစကား စာမေးပွဲစစ်ဆေး၊ သုံးသောင်းခန့် ဖြေဆို
ရန်ကုန်၊ သြဂုတ် ၂၅- လာမည့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင်ခေါ်ယူမည့် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ၏ အလုပ်အကိုင်နေရာများအတွက် မြန်မာ လုပ်သား သုံးသောင်းဝန်းကျင် HRD Korea ၏ ပထမအဆင့် ဘာသာစကားကျွမ်း ကျင်မှုစာမေးပွဲကို စတင်စစ်ဆေးလျက်ရှိ ကြောင်းသိရသည်။
သြဂုတ် ၂၅ နှင့် ၂၆ ရက်တို့တွင် ပညာ ရေးတက္ကသိုလ်(ရန်ကင်း) အလုပ်သမားလေ့ ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်း၊ နိုင်ငံခြားဘာ သာစကားတက္ကသိုလ်နှင့် ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်တို့တွင် စာစစ်ဌာန ငါးခုဖြင့် တောင်ကိုရီးယားသို့သွားရောက် လုပ်ကိုင် ခွင့်ရရှိရေးပထမအဆင့်ဖြစ်သည့် ဘာသာ စကား ကျွမ်းကျင်မှုစာမေးပွဲကို မြန်မာအစိုးရ ပြည်ပအလုပ် အကိုင်အေဂျင်စီနှင့် HRD Korea တို့၏ တိုက်ရိုက်ကြီးကြပ်မှုဖြင့် ဖြေ ဆိုလျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။
ယင်းစာမေးပွဲကို HRD Korea က တိုက်ရိုက်စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ပြီး မရိုးမသား ဖြေဆိုသူများနှင့် လူစားထိုးဖြေဆိုမှုများရှိခဲ့ ပါက HRD Korea အနေနဲ့ စာမေးပွဲဖြေ ဆိုခွင့် သုံးနှစ်ပိတ်ပင်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရ သည်။
”အခုဖြေဆိုတဲ့သူတွေက စိုက်ပျိုးရေး၊ ဆောက်လုပ်ရေးနဲ့ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းအ လုပ်အကိုင်တွေအတွက်ကို ဖြေဆိုတာဖြစ်ပါ တယ်။ စုစုပေါင်း နှစ်ရက်လုံးအတွက်ကို လုပ်သား ၂၈၂၃၅ ဦး ၀င်ရောက်ဖြေဆိုတာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု အစိုးရပြည်ပအလုပ်အကိုင် အေဂျင်စီမှလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်သင်းသင်းလွင်ကပြောသည်။
လက်ရှိဖြေဆိုနေသည့် ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေး ခြင်းသည် ပထမအဆင့်ဖြစ်ပြီး ယင်း အဆင့်အောင်မြင်ပါက ကျွမ်းကျင် မှုစမ်းသပ်စစ်ဆေးသည့် Skill Test ကိုစစ်ဆေးမည် ဖြစ်သည်။ ထပ်မံ ၍ Basic skill အင်တာဗျူး၊ Physical Test တို့ကိုစစ်ဆေးပြီး အောင် မြင်မှသာ အလုပ်လျှောက်ထားခွင့် ရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း လက်ထောက် ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်သင်းသင်း လွင်မှ သိရသည်။
တောင်ကိုရီးယားတွင် အလုပ် လုပ်ကိုင်လိုသူ မြင့်တက်လျက်ရှိပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း အဆိုပါဝင်ခွင့် လျှောက်ထားသူ ဦးရေမှာ ၃၀၀၀၀ ကျော်အထိရှိခဲ့သလို ၂၀၁၈ ခုနှစ် တွင် ၃၀၀၀၀ ကျော်အထိရှိသည်။ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသို့ အလုပ် သွားရောက်လုပ်ကိုင်ခွင့်ကို မြန်မာ အစိုးရ ပြည်ပအလုပ်အကိုင်အေ ဂျင်စီနှင့် HRD Korea တို့မှ နှစ် နိုင်ငံ EPS စနစ်ဖြင့်ပို့ဆောင်နေ ခြင်းဖြစ်သည်။
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအနေ ဖြင့် ၂၀၁၇ခုနှစ်အတွက်လျှောက် ထားသူများထဲမှ စာမေးပွဲအောင်မြင် သူ မြန်မာလုပ်သား ၄၁၀၀ ဦးသာ အလုပ်ခေါ်ယူခဲ့ပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ်အ တွက်လျှောက်ထားသူများထဲမှ အောင်မြင်သူလုပ်သားဦးရေ ၅၀၀၀ ကျော်သာခေါ်ထားသည်။
အစ်ဂီအဇီလာရှဲ့Sally Walker ဂီတဗီဒီယိုထွက်ရှိလာ
ညောင်ဦးမြို့နယ် ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းဘေးတွင် ပလင်းကမ်းသာယာ ဆင်စခန်း ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်?
မန်းရွှေစက်တော်ရာ ဘုရားပွဲတော်ဖွင့်ပွဲကျင်းပ ၊ သီတဂူဆရာတော်ဘဒ္ဒန္တÓဏိဿရ ဘုရားပွဲမုခ်ဦးကို ?
လွှတ်တော်အတွင်း မြို့တော်ဝန်ပြောခဲ့သည့် ပေါက်လွှတ်ပဲစား အသုံးအနှုန်းကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှ??